Monday June 01, 2009 - 16:21:00 in Tacsi by Xarunta Dhexe
ALLAHA u Naxariistee Xasan Maxamed Siyaad (55) oo ka mid ahaa ganacsatada ugu waaweyn dalka Koonfur Africa iyo Ibraahim Maxamed Colow (23), ayaa ku nafwaayey Shil gaari oo xalay ka dhacay Magaalada Madaxda Botswana.
Sida uu saxaafadda u xaqiijiyey Gudoomiyaha Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Somali Community Board, C/raxmaan Axmed Cumar (Jidow) ayaa isagoo ku sugan Gobalka Western Cape, waxa uu qiray geerida muwaadiniintaasi Soomaalida ah iyo dhaawaca tiro kale oo Soomaali ah.
Gudoomiye C/raxmaan Jidow, waxa uu sheegay in muwaadiniintan ku waxyeelowday mashaqadaasi Shilkaasi, ay ka mid ahaayeen ganacsatada ugu tunka weyn ee ka ganacsada gawaarida, kuwaasi oo u kala goosha Magaalada Durban ee dalkan Koonfur Africa ilaa Magaalada Gaborone ee dalkaasi Botswana.
Lama oga ilaa iyo iminka sababta keentay Shil baabuureedkaasi ay ku nafwaayeen Muwaadiniintaasi Soomaaliyeed, iyadoo isdoo kalana aan wali la shaacin tirada ku dhaawacantay.
Ugu dambeyntiina Gudoomiyaha Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Somali Community Board C/raxmaan Axmed Cumar (Jidow), ayaa isagoo ku hadlaya magaca Jaaliyadda Soomaaliyeed ee kuwada nool dalka Koonfur Africa, waxa uu tacsi tiiraanyo leh u diray eheladii iyo asxaabtii ay ka geeriyoodeen ALLAHA u naxariistee Labadaasi marxuum, isagoo ILAAHAY SWT uga baryey inuu ka waraabiyo Jannatul Fardowsa, iyagana uu samir iyo iimaan EEBE ka siiyo INNAA LILLAAH WA INAA ILAYHI RAAJICUUN.